Kudzosera mutemo-Kicheni Faucets, Pot Yekuzadza Mapombi, Mabhomba ekugezera | WOWOW
musha / dzosera urongwa
Tine mutemo wekudzoka kwemazuva makumi matatu, zvinoreva kuti une mazuva makumi matatu mushure mekugamuchira chinhu chako kukumbira kudzoserwa.
Kuti uve unofanirwa nekudzoka, chinhu chako chinofanira kunge chiri mumamiriro iwawo awakaigamuchira, usinga sarudzwe kana kusashandiswa, ane ma tag, uye mune ake epakutanga kurongedza. Iwe zvakare uchada risiti kana chiratidzo chekutenga.
Kutanga kudzoka, iwe unogona kutibata nesu pa service@wowowfaucet.com. Kana kudzoka kwako kukagamuchirwa, tinokutumira tsamba yekudzoka yekutumira, pamwe nemirairo yekuti ungaitumira sei pakeji yako uye kupi. Zvinhu zvakatumirwa kudzoka kwatiri zvisina kutanga wakumbira kudzoserwa hazvigamuchirwe.
Iwe unogona kugara uchitibata nesu kune chero mubvunzo wekudzoka kubasa@wowowfaucet.com.
Kukuvadza uye nyaya
Ndokumbira kuti utarise odha yako parinotambirwa uye ubvunze isu nekukurumidza kana chinhu chacho chikakanganisika, chikakuvadzwa kana iwe ukagashira icho chisiri icho, kuti tikwanise kuyedza nyaya yacho tigoigadzirira.
Kunze / zvinhu zvisingadzoreke
Dzimwe mhando dzezvinhu hazvigone kudzoserwa, sekunge zvinhu zvinoparara (sekudya, maruva, kana zvidyarwa), zvigadzirwa zvetsika (semairairo akasarudzika kana zvinhu zvakasarudzika), uye nhumbi dzekuriritira (seyakagadzirwa runako). Isuwo hatigamuchire kudzoka kwezvinhu zvinokuvadza, zvinwiwa zvinopisa, kana magasi. Ndokumbira kuti mubate kana uine mibvunzo kana kunetsekana nezve chinhu chako chaicho.
Nehurombo, hatigone kubvuma kudzoka pazvinhu zvinotengeswa kana makadhi ezvipo.
Nzira yekumhanya-mhanya yekuona kuti unowana zvaunoda ndeyekudzosera chinhu chauinacho, uye kana chingodzoka chogamuchirwa, chitenga chakasiyana chechinhu chitsva.
Isu tichakuzivisa iwe kana tangogamuchira uye kuongorora kudzoka kwako, uye takuzivisa iwe kana mari yacho yakatenderwa kana kuti isina. Kana ikabvumirwa, iwe unodzoserwa kudzoreredzwa pane yako yekutanga nzira yekubhadhara. Ndapota yeuka kuti zvinogona kutora imwe nguva kune yako bhangi kana kiredhiti kambani kambani kugadzirisa uye kutumira kudzoserwa zvakare.
Kana iyo yekudzoka yakakonzerwa nemutengi, mutengi anofanira kunge ane mhosva yemutero wekutumira. Iyo chaiyo mari inobhadharwa inofanirwa kuve inoenderana nekambani yekutaura yaunosarudza.
Kana nekuda kwezvikonzero zvedu, izvo zvinhu zvakatambirwa zvakakanganisika kana kuti zvisina kurongeka, uye mutengi haafanirwe kutakura mutero wekutumira nechikonzero ichi.
Hapana mubhadharo wekudzoreredza unobhadharwa kune vatengi kudzosa kwechigadzirwa.